दलाई लामाविरुद्ध खनिए धिरज राई, नेपालीको अपमान गर्नेविरुद्ध अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको छ (भिडियो) – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर ११, २०७४१०:२७
काठमाडौं, ११ मंसिर । भारतमा निर्वासित तिब्बतीयन धर्मगुरु दलाई लामाले ‘गौतम बुद्ध नेपालमा नभई भारतमा जन्मिएका हुन्’ भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध संसारभर विरोध भएको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि दलाई लामाले आफ्नो भनाइ सच्याउँदै ‘गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्’ भनी प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
तर, दलाई लामाको सो प्रस्टीकरण पूर्ण नभएको भन्दै पपगायक धिरज राईले अब त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । विगत सात–आठ वर्षदेखि गायक राईले ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, नट इन इन्डिया’ भन्ने अभियान नै चलाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तिब्बतीयन धर्मगरु दलाई लामाको अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीकै अपमान गरेको भन्दै धिरजको भनाइ छ । ‘दलाई लामा जो बुद्ध धर्मको प्रचारक, धर्मगुरु हुन्, उनले नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत पाएका छन्, उनकै मुखबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया लज्जास्पद हो,’ राईले भने ।
नेपालीहरूको सहयोगी भावको विदेशीले फाइदा लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘गौतम बुद्धको विषय यतिविधि लम्बियो कि बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने नेपाली उखानलाई यसले चरितार्थ गरेको छ । हरेकपटक कतैबाट हमला गर्ने अनि त्यो हमलाको भाव अभिव्यक्ति त्यो हैन भनेर माफी माग्दैमा सकिने गरेको छ,’ गायक राईले मिडिया एनपीसँग भने,
‘हामी नेपालीले दीर्घकालीनभन्दा पनि क्षणिक आश्वासनले चित्त बुझाएकै हुनाले यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । यसलाई निचोड दिनैका लागि पनि केही ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ । अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने छ र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न म तयार छु, यसमा सबै नेपालीको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’
उम्मेदवारद्वारा सुरक्षाको माग
हेर्नुहोस, पुर्वमा भेटिए बखत र प्रतिभाको डुप्लिकेट , भेटेको १ हप्ता नबित्दै भयो बिहे ! बोली पनि बखतको जस्तै छ (भिडियो)
जिताउने होइन त शृङ्खलालाई ? ल आउनुस यसरी भोट गरौ! यस्तो छ भोट गर्ने तरिका (भिडियो)
नियम मिच्ने कार पुलिसले जफत गरेपछि मालिक्नीको तमाशा, पार गरिन् सबै हद (भिडियो)